२०२० सम्ममा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग बनाउन हामी सबै जुटौं | Mahesh Pathak
हालै मिडियामा आएको समाचार अनुसार काठमाडौ-केरुङ रेलमार्ग निर्माणको लागी करिव ३ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ। धेरै जसो ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउनु पर्ने भएकोले महँगो पर्न जानु स्वभाविक हो। दृढ राजनीतिक इक्षाशक्ती हुने हो भने यो कुरा पक्कै संभव छ। तर, अहिले सबैको मनमा यहि प्रश्न छ, के नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले त्यो दृढ इक्षाशक्ती राख्दछन्?
सबै भन्दा ठुलो चुनौती – राजनीतिक अस्थिरता
धेरै चुनौती छन् हामीमाझ। वाह्य चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। देश भित्रकै राजनितिक अस्थिरता नै सबै भन्दा ठुलो बाधक बन्ने देखिन्छ। चिनसँग संझौता गर्ने केपी ओलीको सरकार परिवर्तन भएर प्रचण्ड अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। अबको ९ महिना पछी शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ। यस्तै हो भने २०२० सम्ममा हामीले ४ जना प्रधानमन्त्री पाउनेछौं।
हरेक नेताको आफ्नै निति हुन्छ, काम गर्ने शैली हुन्छ। ४ वर्षमा ४ जना नेताको निति र शैलीको बिचमा ३ खर्बको रेलमार्ग निर्माण सुरु होला? विना अवरोध सम्पन्न बन्ला? यी जटील प्रश्नहरु हाम्रा सामु तेर्सीएका छन्।
अन्त्यममा, यो रेलमार्ग नेपालको विकास तथा अस्तित्व रक्षाको लागी कति महत्वपुर्ण छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा नै छ। अनि, यो पनि थाहा छ कि यदी दृढ राजनितीक इक्षाशक्ती हुने हो भने जस्तो सुकै चुनौती पनि सामना गर्न सक्छौं। तर, राजनितिक इक्षाशक्ती जुटाउनु नै हाम्रो लागी ठुलो चुनौती बन्ने निश्चित छ। त्यसैले, हामी सबैले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुलाई निरन्तर कडा खबरदारी गर्नु अत्यावश्यक छ।
← म संसदीय सर्वोच्चता सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु	BibekSheel Nepali Professional Help Desk सँगको अनुभव →